Asomdwoe a Wɔrehwehwɛ
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | July 1, 2005
KENKAN WƆ Albanian Arabic Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greenlandic Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Samoan Sepedi Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese
NÁ Albert yɛ ɔwarefo a ɔwɔ mma baanu a n’ani gye wɔ n’aware mu. Nanso ɔtee nka sɛ na n’asetra nwie pɛyɛ. Bere bi a na ɔrehwehwɛ adwuma ayɛ denneennen no, ɔde ne ho kɔhyɛɛ amanyɔsɛm mu kodii amammu a wɔkyerɛ sɛ obi nsen obi akyi. Ɔbɛyɛɛ Komunis amanyɔkuw no muni mapa mpo.
Nanso, ankyɛ na Albert paa abaw wɔ Komunis amammu ho. Ogyaee amanyɔsɛm akyi di de n’adwene nyinaa sii n’abusua yiyedi so. Anigye a na ɔbɛma n’abusua anya bɛyɛɛ ade titiriw wɔ n’asetra mu. Nanso, na Albert da so ara te nka sɛ n’asetra nwie pɛyɛ; na onnyaa asomdwoe a ɔrehwehwɛ no.
Ɛnyɛ Albert nkutoo na ɔwɔ tebea a ɛte saa mu. Nnipa pii asɔ adwenkyerɛ, nyansapɛ, ne ɔsom ahorow ahwɛ sɛ ɛbɛma wɔanya asetra a edi mu anaa. Nnipakuw bi sɔree wɔ 1960 mfe no mu wɔ Aman a Wodi Yiye mu a wɔkasa tiaa abrabɔ pa ne sɛnea na nnipa yɛ wɔn ade a na obiara gye tom no. Mmabun titiriw na wɔfaa nnubɔne ne wɔn a wɔfrɛ wɔn ho akyerɛkyerɛfo ne asɔfo mpanyin wɔ kuw no mu nyansapɛ so hwehwɛɛ anigye ne asetra a edi mũ. Nanso, saa kuw yi antumi amma wɔannya anigye ankasa. Mmom no, ɛmaa nnubɔnenom kaa nnipa pii hɔ, na ɛmaa mmabun pii nso bra sɛe. Eyi maa ɔbrabɔne nyaa nkɔanim.
Nnipa pii afa ahonyade, tumi, anaa nhomasua so ahwehwɛ anigye mfehaha pii ni. Awiei koraa no, saa kwan a wɔfa so hwehwɛ anigye yi kowie abasamtu mu. Yesu kae sɛ: “Sɛ onipa nya ma ebu so mpo a, ɛnyɛ nneɛma a ɔwɔ no mu na ne nkwa fi.” (Luka 12:15) Mmom no, wɔn a wɔpɛ sɛ wonya wɔn ho ɔkwan biara so no ntaa nnya anigye a wɔrehwehwɛ no. Bible ka sɛ: “Wɔn a wɔn ani abere sɛ wɔbɛyɛ adefo no hwe sɔhwɛ ne afiri ne nkwasea akɔnnɔ a ɛyɛ hu bebree mu, na ɛno na ɛde nnipa kɔ ɔsɛe pasaa mu. Na sikanibere yɛ bɔne nyinaa nhin, na ebinom adi akyi ma . . . wɔde yaw bebree awowɔ wɔn ho nyinaa.”—1 Timoteo 6:9, 10.
Ɛnde, obi bɛyɛ dɛn anya asomdwoe ne asetra a edi mũ? So ɛsɛ sɛ ɔsɔ nneɛma ahorow bi hwɛ, te sɛ nea obi retow agyan abɔ biribi a ɛwɔ esum mu mu? Anigyesɛm ne sɛ ɛnte saa. Sɛnea yebehu wɔ asɛm a edi hɔ mu no, sɛ yebenya asomdwoe a, ɛsɛ sɛ yehu ade bi a ɛho hia nnipa paa a wɔn nkutoo na wɔwɔ bi.
So ahonyade, tumi, anaa nhomasua a wobɛhwehwɛ bɛboa wo ma woanya asomdwoe?
Share Share Asomdwoe a Wɔrehwehwɛ
w05 7/1 kr. 3-4
“Anigye Ne Wɔn a Wonim Wɔn Honhom Mu Ahiade”
M’ani Agye Sɛ Manya Wiase Nyinaa Bible Nkyerɛkyerɛ Adwuma No Mu Kyɛfa
Wɔde Wɔn Ho Rema
‘Yɛka Papa Ho Asɛmpa’
Asɛmpa A Wɔbɛka Akyerɛ Nnipa A Wofi Amanaman Nyinaa Mu
Ahene Nhoma a Edi Kan no Mu Nsɛntitiriw
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 1, 2005
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 1, 2005
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 1, 2005